Home Wararka MW Sharif oo gaashaanka u daruuray codsi uga yimid MW Farmaajo
MW Sharif oo gaashaanka u daruuray codsi uga yimid MW Farmaajo
Xog sugan oo ay MOL ka heshay Madaxtooyada ayaa sheegeysa in MW Farmajo uu soo wajahay culeys weyn oo kaga yimid madasha cusub ee xisbiyada qaran ay ku midoobeen iyadoo shalay ilaa xalay ay xildhibaanadda isu daba marayeen xaruunta KMG ah ee Madasha.
MW Farmajo ayaa waxaa dabadeed uu toos ula hadlay MW hore shariif Sheekh Axmed oo hadda ah gudoomiyaha madasha isagoo ku yiri “waxaa rabaa inaan kulanno oo aan wadahallo si xaalka loo dajiyo”. Runtii waa habdhaqan lagu yaqaanno MW Farmajo inuu jid qaloocan ku ordo marka ay xaalladdu faraha ka baxdo. Madasha oo u muqata inay leedahay awood weyn oo wax uga badasho siyaasadda MW Farmajo ayaa durbaba ku abuurtay villa Somaliya culeys weyn.
Guddoomiyaha Madasha Xisbiyada Qaran, MW hore Shariif sheekh Axmed ayaa MW Farmajo u sheegay inuusan sameyn Karin inuu la kulmo kaligii maadaama hadda loo doortay hogaaminta madasha qaran ee Xisbiyada dalk. MW Shariif waxaa uu MW Farmajo u sheegay inuu u baahan yahay inuu talada ula noqdo madasha iyo madaxda xisbiyada ee ku midboobay si ay halkaas uga soo baxdo talo loo dhan yahay oo xataa haddii wax lagu heshiiyo dowladda loo wada fuliyo.
Xogaha saaka laga helayo xafiiska Madaxweynaha ee Villa Somalia waxay sheegayaan in MW Farmajo ay ku yimaadeen culeysyo badan oo ka soo wajahay xildhibaanadii taageersanaa isaga oo madasha u wada iilanaya ,bulshada Caalamka oo ku eedeysay inuusan awood u lahayn inuu dalka sii hogaamiyo, madaxda Gobolka oo MW Farmajo ku eedeysay inuu yahay qof aan la’aanmini Karin iyo shacbiga oo hadda caro badan ka qaaday sidii uu dhaqmay Madaxweynaha maalimihh tagay ee ay Musiibada ka dhacday Baletweyne iyo Bardaale ayaa hadda si toos u bilaabay inay baraha bulshada uga baaqaan MW Farmajo inuu is casilomaadama uu ku guuldarreystay hogaamintii dalka.
Madasha Xisbiyada qaran waxaa ka soo muuqday MW hore ee Somaliya Xasan Sheekh Maxamud, ahna guddoomiyaha xisbiga UPD, prof. Gandi oo ah guddoomiyaha xisbiga Nabadda, Xildhibaan Cabdulqaadir Cosoble Cali oo ah guddoomiyaha Xisbiga Ileys iyo Xildhibaan Suleyman Xaashi Xisbiga Himilo iyadoo la leeyahay waxaa madasha madaxdeeda ka mid ah Shariif Sh Aden.
Lama huba ilaa iyo hadda waxa ay hogaanka madasha qaran ka yeeli doonaan codsiga MW Farmajo inkasta oo uu cimridheerersi u muuqdo haddana waxaa mar waliba muhimadda leh in dalka la badbaadiyo oo aan lala kulmin MW Farmajo haddii ay dhibaato dalka ugu jirto. Dhinaca kale waxaa Khasab ah in lala kulmo haddii ay danta dalka ku jirto.